Kubiza malini ukufumana icici? | Amadoda aQinisekileyo
Nokuba yeyiphi indlela yokuphila ongayikhetha eyona nto ifanelekileyo yokutshatisa indlela onxiba ngayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukunxiba icici okanye hayi kuya kuba lukhetho lomntu ngamnye kwaye ukuba uyathandabuza ukuba inokudala umkhwa, ngokungathandabuzekiyo ewe. Kumashumi eminyaka nakwiinkulungwane sisincedisi esingazange sisilele emntwini.
Xa usenza icici, kubalulekile ukuba ukhethe kakuhle indawo leyo kunye nohlobo oluya kulunga kwisitayile sakho. Omnye umqobo ngu ingabiza malini ukwenza oko kwaye oko kuyakuxhomekeka kwisiza nakwindlela esenziwe ngayo. Ukwenza oku, naka ingqalelo kuzo zonke iindawo apho unokwenza icici.
1 Iindawo kunye nexabiso apho unokufumana icici
2 Imilinganiselo yezempilo ngaphambi nasemva komqala
3 Ungazinyanga njani izifo ezosulelayo
Iindawo kunye nexabiso apho unokufumana icici
Indawo yokuqala enokwenziwa ngamacici ekhemesti. Iyasebenza kwaye ayibizi, akukho xabiso libekiweyo lokufumanisa ukuba ingabiza malini, kodwa amaxabiso alo aphakathi kwe- € 5 kunye ne- € 10, kuxhomekeke kwinkonzo ekhemesti efuna ukuyinika kunye nomgangatho wamacici oza kufakelwa, kuba ixabiso lifakiwe.
Inkqubo yakhe iqulathe lUkufakwa kwamacici ngompu, indlela elula, ekhawulezayo nefanelekileyo. Indlela yakhe kukubeka uxinzelelo lwecici elenziwe ngezinto ze-hypoallergenic apho i-nut yayo ifakwe khona. Le nkqubo iyasebenza kwaye inokhuseleko lokhuseleko ekuthinteleni i-nut ukuba ingabikho kwaye akukho nzakalo.
Ezi Amacici "hypoallergenic" Zenziwe ngezixhobo ukuze zinganiki i-aleji xa zinxibelelana nolusu, ezibizwa ngokuba yi-allergies eczema. Uninzi lwamacici afakwa ezikhemesti lwenziwe ngentsimbi entle enje nge titanium.
Umpu ukwenza amacici
Enye yeendawo apho zikhethekileyo ekwenzeni amacici iivenkile zokugqobhoza. Apha kuyakwenziwa ngesandla, ukugqobhoza indawo ngenaliti apho icici liya kufakwa kwangoko.
Indlela abenza ngayo kunye nobungcali obunyanzeliswa ngabo bazenzayo, ziya kulinyusa ixabiso labo liphezulu kakhulu. Ukugqobhoza iindlebe ezimbini inokufikelela kwi-30 euros kwaye ukuba yenziwe ngokukodwa malunga ne-20 euros. Kodwa ngamaxabiso aqikelelweyo, kuba kuxhomekeka kwindawo kunye nobunzima, kuya kusebenza ixabiso elinye okanye elinye.
Imilinganiselo yezempilo ngaphambi nasemva komqala
Kubalulekile landela uthotho lwamanyathelo ococeko ngaphambi kokwenza icici. Zonke ezi ndawo sele zilandela umthetho olandelwayo ngaphambi kokwenza, kodwa ukuba ufuna ukwazi ngesandla ukuba ukulandelwa kwabo kunjani, naka ingqalelo.
Zombini umpu kunye nendlela yokubhoboza ngesandla kufuneka ube nayo Zonke izinto zibulala iintsholongwane kwaye zibulala iintsholongwane, kubandakanya namajikazi aza kusetyenziswa. Kubalulekile ukuba abasebenzi banxibe iiglavu ngexesha lokuziqhelanisa kwabo kwaye indawo apho kufakwa icici icocwe kakuhle.
Ukuphilisa kuyo nayiphi na indlela yayo kulula ukuyenza, kodwa ukuphiliswa kwayo njengomthetho oqhelekileyo kunzima. Ukucoca indawo kufuneka ube nezandla ezicocekileyo kwaye kuxhomekeke kwindawo abanokucebisa ngayo ukuphilisa ngandlela thile. Ngokufanelekileyo, coca indawo yonke imihla nge Isaline isisombululo, i-crystalline okanye i-spray chlorhexidine solution, emva kokwenza ukujika okupheleleyo kwithambeka kwaye uvumele liphumle.
Ukuphiliswa kwayo kunzima kuba kuthatha ixesha elide ukuphilisa. Kuya kufuneka ube nomonde kuba kukho iimpendulo usulelo kunye nokudumba Ngexesha lokuphiliswa kwayo kwaye kudala ukungathandeki okukhulu, ngakumbi ngexesha lokulala. Ukunyanga kungathatha ukuya kunyaka ukwenza ukuba kwenziwe ngokusemthethweni kwaye kubalulekile ukuba ungasusi icici kuba umngxuma unokuvaleka.
Ungazinyanga njani izifo ezosulelayo
Into eqhelekileyo ngexesha lokuphilisa kwakhe kukuqaphela oko indawo ibomvu kwaye kwezinye iimeko ezinye iintlungu kunye nokuphazamiseka kuyaziva. Kodwa xa le ndawo ibomvu kakhulu, iba nzima, idume kwaye uqaphele ukuba kushushu kakhulu ekuphatheni, kungenxa yokuba unesifo esibi kakhulu.
Ngokufanelekileyo, bulala iintsholongwane kwindawo kaninzi ngemini kangangeentsuku ezininzi., musa ukuchukumisa icici kwaye ulishiye likwimeko efanelekileyo. Ukuba le meko ayiphucuki kwaye ubofu (ulwelo olutyheli) luqala ukuphuma, kuya kufuneka ke ubonane nonyango olusebenzayo. Kule meko, a I-antibiotic cream yokunyanga indawo.
IiKeloids yenye ingxaki ezinokubonakala ngexesha lokuphilisa. Kukho abantu abathi, ngenxa yohlobo lolusu lwabo, banenye indlela yokuphilisa la manxeba. Kule meko, izicubu ziyaphilisa ngaphandle, zivelise iqhuma elincinci elibizwa ngokuba yi keloid.
Ezinye iingxaki zinokuba lelo cici ayenziwanga ngento efanelekileyo umzimba wakho uyayixhasa. Ukuba ukrokrela ukuba ayisiyiyo into evumela indawo ukuba iphilise kakuhle, jonga enye ene-alloy engcono. Kule meko, eyona isebenza kakuhle yigolide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Kubiza malini ukufumana icici?